Tatitra vaovao momba ny fizahantany momba ny fizahantany avy amin'ny Tontolo hafa?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Tatitra vaovao momba ny fizahantany momba ny fizahantany avy amin'ny Tontolo hafa?
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany
Taorian'ny tapa-bolana voalohany tamin'ny taona 2021, nitombo indray ny fizahantany iraisam-pirenena nandritra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tany amin'ny Ila Bolantany Avaratra, izay nanatsara ny vokatra tamin'ny ampahefatry ny taona, indrindra tany Eoropa.
Miaraka amin'ny fivoriamben'ny UNWTO natao tamin'ity herinandro ity tany Madrid, ny fikambanana dia namoaka ny UNWTO World Tourism Barometer ny alatsinainy.
Ity Barometer UNWTO ity dia novokarin'ny fitantanan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany nanomboka tamin'ny taona 2003 ary ahitana fikarohana momba ny toetry ny tontolon'ny fizahantany sy fizahantany.
Miaraka amin'ny fivoarana vaovao mipoitra amin'ny tadin'ny COVID Omicron vaovao, miaraka amin'i Afrika Atsimo mitoka-monina amin'ny tontolo hafa, ary miaraka amin'ny Fivoriamben'ny UNWTO izay mihidy ho an'ny sasany, saingy mbola mandroso manohitra ny olana rehetra, ity tatitra ity dia toa avy amin'ny hafa. izao tontolo izao.
Miverina amin'ny Q3 fa mbola marefo ny fanarenana
Araka ny fanontana farany an'ny UNWTO World Tourism
Barometer, Nitombo 58% ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena (vahiny alina) tamin'ny Jolay-Septambra raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taona 2020. Na izany aza, nijanona ho 64% izy ireo ambanin'ny haavon'ny 2019. Eoropa dia nandrakitra ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny telovolana fahatelo, miaraka amin'ny fahatongavana iraisam-pirenena 53% nidina tamin'ny fe-potoana telo volana tamin'ny 2019. Tamin'ny volana Aogositra sy Septambra dia -63% raha oharina tamin'ny 2019, ny vokatra tsara indrindra isam-bolana hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
Teo anelanelan'ny Janoary sy Septambra, Ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena maneran-tany dia -20% raha oharina tamin'ny taona 2020, fanatsarana mazava raha oharina amin'ny enim-bolana voalohany amin'ny taona (-54%). Na izany aza, ny fahatongavana amin'ny ankapobeny dia mbola 76% ambanin'ny haavon'ny pre-pandemic miaraka amin'ny fampisehoana tsy mitovy amin'ny faritra manerantany. Any amin'ny faritra kely sasany - Eoropa Atsimo sy Mediteraneana, Karaiba, Amerika Avaratra ary Afovoany - dia nitombo mihoatra ny haavon'ny 2020 ny fahatongavan'izy ireo tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny 2021. Nosy sasany any Karaiba sy Azia Atsimo, miaraka amin'ny toerana kely vitsivitsy any atsimo sy atsimo. Eoropa Mediteraneana dia nahita ny zava-bitany tsara indrindra tamin'ny Q3 2021 araka ny angon-drakitra misy, miaraka amin'ny fahatongavana manakaiky, na indraindray mihoatra ny haavon'ny pre-pandemic.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili dia nilaza hoe: “Mampahery ny angon-drakitra ho an'ny telovolana fahatelo amin'ny 2021. Na izany aza, ny fahatongavana dia mbola 76% ambanin'ny haavon'ny pre-pandemic ary ny vokatra manerana ny faritra eran-tany dia tsy mitovy. ” Manoloana ny firongatry ny tranga sy ny firongatry ny karazany vaovao, dia nampiany izy fa “tsy afaka ny hiambina isika ary mila manohy ny ezaka ataontsika mba hiantohana ny fidirana mitovy amin'ny vaksiny, ny fandrindrana ny fomba fandehanana, ny fampiasana ny mari-pankasitrahana vaksiny nomerika mba hanamorana ny fivezivezena ary hanohana hatrany ny sehatra ».
Ny fiakaran'ny fangatahana dia natosiky ny fitokisan'ny mpandeha tao anatin'ny fandrosoana haingana amin'ny fanaovana vaksiny sy ny fanalefahana ny famerana ny fidirana any amin'ny toerana maro. Any Eoropa, ny Taratasy Covid Digital EU nanampy tamin'ny fanamorana ny fivezivezena malalaka tao amin'ny Vondrona Eoropeana, namoaka ny fitakiana be dia be taorian'ny volana maro nisian'ny dia voafetra. Ny fahatongavana dia 8% ihany teo ambanin'ny fe-potoana mitovy tamin'ny 2020 nefa mbola 69% ambanin'ny 2019. Amerika dia nandrakitra ny vokatra miditra matanjaka indrindra tamin'ny Janoary-Septambra, izay niakatra 1% raha oharina tamin'ny taona 2020 nefa mbola 65% ambanin'ny haavon'ny 2019. Ny Karaiba dia nandrakitra ny vokatra matanjaka indrindra amin'ny subfaritra miaraka amin'ny fahatongavana niakatra 55% raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2020, na dia mbola 38% eo ambanin'ny 2019 aza.
Miadana sy tsy mirindra ny fahasitranana
Na dia eo aza ny fanatsarana hita tamin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona, ny tsy mitovy ny hafainganan'ny fahasitranana manerana ny faritra maneran-tany. Izany dia noho ny ambaratonga samihafa amin'ny famerana ny fivezivezena, ny tahan'ny vaksiny ary ny fahatokisan'ny mpandeha. Raha toa i Eoropa (-53%) sy Amerika (-60%) dia nitombo tsikelikely nandritra ny telovolana fahatelo tamin'ny 2021, ny fahatongavan'ireo tonga tany Azia sy Pasifika dia nidina 95% raha oharina tamin'ny taona 2019 satria maro ny toerana nikatona tamin'ny dia tsy ilaina. Afrika sy Afovoany Atsinanana dia nihena 74% sy 81% tsirairay avy tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny 2021 raha oharina tamin'ny 2019. Anisan'ireo toerana lehibe kokoa, Kroasia (-19%), Meksika (-20%) ary Torkia (-35%). ny vokatra tsara indrindra amin'ny Jolay-Septambra 2021, araka ny vaovao azo amin'izao fotoana izao.
Fanatsarana tsikelikely ny vola miditra sy ny fandaniana
Ny angon-drakitra momba ny fidiram-bolan'ny fizahantany iraisam-pirenena dia mampiseho fanatsarana mitovy amin'izany tamin'ny Q3 tamin'ny 2021. Meksika dia nandrakitra ny vola miditra mitovy amin'ny 2019, raha i Torkia (-20%), Frantsa (-27%) ary Alemana (-37%) dia namoaka fihenam-bidy kely kokoa avy amin'ny tany am-piandohan'ny taona. Amin'ny fitsangatsanganana any ivelany, ny vokatra dia tsara kokoa ihany koa, miaraka amin'i Frantsa sy Alemana mitatitra -28% sy -33% tsirairay avy amin'ny fandaniana fizahan-tany iraisam-pirenena mandritra ny telovolana fahatelo.
Na eo aza ny fanatsarana vao haingana, ny tahan'ny vaksiny tsy mitovy eran'izao tontolo izao sy ny tebiteby vaovao Covid-19 dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasitranana efa miadana sy marefo. Ny fahasahiranana ara-toekarena nateraky ny areti-mifindra dia mety mandanja ny fitakiana fitsangatsanganana, miharatsy noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika vao haingana sy ny fanelingelenana ny rojo famatsiana.
Araka ny angon-drakitra farany nataon'ny UNWTO, ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena dia andrasana hijanona eo amin'ny 70% ka hatramin'ny 75% eo ambanin'ny haavon'ny 2019 amin'ny 2021, fihenam-bidy mitovy amin'ny tamin'ny 2020. Mbola hisy fiatraikany betsaka araka izany ny toekaren'ny fizahantany. Ny harinkarena faobe mivantana an'ny fizahantany dia mety hamoy 2 trillion dolara amerikana hafa, mitovy amin'ny tamin'ny taona 2020, raha tombanana ho 700-800 tapitrisa dolara ny fanondranana avy amin'ny fizahantany, ambany noho ny 1.7 trillion dolara amerikana voasoratra tamin'ny taona 2019.
Ny fiverenana azo antoka amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena dia hiankina betsaka amin'ny valin-kafatra mirindra eo amin'ireo firenena amin'ny resaka famerana ny dia, ny fiarovana mirindra ary ny fidiovana, ary ny fifandraisana mahomby hanampy amin'ny famerenana ny fahatokisan'ny mpanjifa, indrindra amin'ny fotoana izay mirongatra ny tranga any amin'ny faritra sasany. .